Awachithwe amanzi: OkaMsuthu uthi asikhohlwe - Bayede News
Home » Awachithwe amanzi: OkaMsuthu uthi asikhohlwe
Isithombe: Igunundu Agency/nguNhlanhla Mtaka
Ipolitiki isidunge ezokuphatha. Izisebenzi sezibangisana nosopolitiki ngenkohlakalo
Ezitheni zakhe ubizwa ngohlanya, ugedegede olungakwazi ukuthula. Kanti kulaba abamthandayo ungomunye wabaholi abanciphayo abaqotho nabayenyanyayo inkohlakala. Lona nguDkt uMakhosi Busisiwe uMaKhoza. Lona akuyena uDkt ngegama noma ngokuhlonishwa kepha uyikizela imiyezane kwezemfundo njengoba phakathi kokunye eneqhuzu lePhD kwezokuphatha kanye neleMasters kuSocial Science (Policy Development). ElaboHlanga libe nenkulumo ekhethekile naye nayilapho ekhulume kabanzi ngakubize ngongqingetshe wepolitiki nezokuphatha kuleli. Uthi inkohlakalo enqunu isidla lubi nathe okubuhlungu abalimalayo ngaboHlanga belinyazwa ngabakwabo okungabaholi bepolitiki.
“Ake ngiyibeke kanje le ndaba. Angisho ukuthi kukhona ukweba okungcono kepha uyabona abelungu bayeba kodwa ukweba kwabo kuye kufihleke ngoba abathathi konke. Laba bakithi bona uma beba bathatha konke kungabibikho lutho, imali ingene yonke emaphaketheni abo. Empeleni e-Afrika sibhekene nenkohlakalo ewubuphukuphuku engaxoleleki ngendlela osopolitiki bakhona abangenanembeza ngayo uma sebeba,” kusho uMaKhoza.
Khona lapho uthi okwenza kube nenkinga wukuthi izisebenzi okuyizo okumele zime emigomeni nazo sezigwamandiwe sekuyizo eziqhudelana nosopolitiki kudliwa imali yabakhokhintela. Uthi okubuhlungu wukuthi inkohlakalo lena isiphenduke usiko nokuthi umphakathi uyabuka nje abantu abasolwa ngenkohlakalo besuswa kupolitiki bese beyodunga ezokuphatha.
“Uthola imeya ehlulwe umasipala ixoshwa esikhundleni kodwa ingaboshwa bese emva kwalokho yenziwe isisebenzi sikamasipala. Uyothi uzwa isinikezwe isikhundla sokuba uMphathiswa. Lokho kukodwa nje kwenza kucace kuzo zonke izisebenzi zakomasipala nezikuHulumeni omkhulu ukuthi inkohlakalo sekuyinto eyamukelekile ngoba namhlanje uyisisebenzi bese siganga sithathelwe izinyathelo. Ngakusasa usenguMphathiswa useyabuya uzoziphindiselela kuwe obumthathele izinyathelo eseyisisebenzi, “ usho kanje.
Ebuzwa ukuthi pho isixazululo kungaba yisiphi uthe izisebenzi azithathe indawo yazo zibuyele kulokho ezabe ziyikho.
“Esimweni esejwayelekile umuntu uqashwa ngokwekhono nemfundo yakhe. Usuke ezoba ngumeluleki kumuntu (usopolitiki) kwesinye isikhathi ongenalo ikhono nemfundo yalokho akuphathisiwe. Ngenxa yalokho isisebenzi esiqotho ngesimlulekayo usopolitiki kungakhathaleki ukuthi uyiliphi iqembu,” kusho okaMsuthu enza isibonelo ngaye athi wasebenza ngaphansi kwe-Inkatha Freedom Party ( IFP) kwaNaloga.
“Akuyona imfihlo ukuthi angivumelani ne-IFP kepha ngesikhathi ngigqoke ikapisi lokuba ngumsebenzi kwaNaloga, uMhlonishwa uMtomuhle Khawula wabe engumphathi wami. Lapha okwakumqoka wukuba ngenze inkonzo yesizwe ngaphandle kwemizwa nezinkolelo zami zepolitiki.”
Echaza ngenkohlakalo komasipala uthe: “Sibhekene nenkinga ngoba ngikhuluma nawe nje kwabanye omasipala njengoba kuhlale kuthiwa banesikweletu sikagesi kodwa okungaziwa ukuthi sidalwa yini. Inkohlakalo yezisebenzi ezingaphakathi ezihlangana nabantu emphakathini benze umgunyathi wokukhokhela ugesi.
Ukungenelela ngemali emnothweni wezwe
“Uthole ukuthi uma kunomuntu okufanele akhokhe ugesi ngezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga kodwa ugcina ekhokha inkulungwane eyodwa bese ingxenye yayo iye kulesi sisebenzi esenze lo layini wenkohlakalo”
OkaMsuthu ubabaze nesihluku sepolitiki yamaqembu nathe iyakwazi ukwenza abaholi abaqotho izimvu zomhlatshelo nalapho enze isibonelo ngowayeyiMeya yaseMsunduzi, uMnu uThemba Njilo nathi waphoswa emanketshaneni kwaziwa acishe ona igama lakhe. La manketshana uthi akupolitiki nakuzo izisebenzi zikaMasipala uMsunduzi nathi selokhu kwathi nhlo uphila ngaphansi komlawuli.
Uphethe ngokuthi okubuhlungu wukuthi inkohlakalo ekhona manje yimbi ngoba igadla kwaboHlanga abadla imbuya ngothi. Uthe lesi simo sesidale ukuthi abamhlophe bazakhele uHulumeni wabo ozimele geqe, ngezindlu eziphenduka imiphakathi bevikela okwabo.
Le ngxoxo iyingxenye yochungechunge lapho sixoxa nabesifazane abamqoka, kungekudala kuzoshicilelwa ephelele
nguCelani Sikhakhane Jul 31, 2020